Idizayini ye-elekthronikhi (ukwakheka kwe-Schematic & PCB)
I-VMI (Ukuphathwa Kwabathengisi Bokuphatha)
Ukwethulwa kwesifunda sesistimu yokukhanyisa okungaxhunyiwe kwe-wireless
Uhlelo lokukhanyisa luhlobene kakhulu nempilo yabantu, kepha iningi lamasistimu wokukhanyisa wanamuhla asebenzisa zonke izinhlobo zokushintsha okujwayelekile ukucisha nokucisha amalambu, nokulungiswa kokukhanya okukhanyayo nakho kulungiswa ngokushintshwa okujwayelekile kokufiphala. Ukusebenza ngakunye kohlelo lokukhanyisa ...
Kungani izintengo zebhodi lesifunda eziphrintiwe zikhuphuka ngo-2021?
Kusukela maphakathi no-2020, yonke imboni ye-elekthronikhi kanye nogesi ibilokhu ibona amanani entengo ephrintiwe ebhodi lesifunda enyuka aya phezulu, futhi lokhu kuholela kumanani aphezulu emikhiqizo yokuphela. Kungani amanani ephrintiwe ebhodi lesifunda enyuka ngo-2021? Kulesi sihloko, sizodalula amaveli ngemuva kwe-t ...
Izinzuzo zesevisi eyodwa ye-PCBA
Ngokwamanye ama-start-up, izinkampani ezixazulula izinkinga noma izinkampani ezincane, kujwayelekile ukukhetha ukucutshungulwa kwe-PCBA (ngokujwayelekile, izinkontileka zabasebenzi be-PCBA nezinto zokwakha). Kumabhizinisi angenhla, alukho uhlelo oluphelele lokunikezela, akukho thimba lonjiniyela elihambisanayo neqembu lokuthengwa kwempahla, ngakho-ke badinga ...
Ungabhaka kanjani ama-PCB nezingxenye
Ukubhaka kwe-PCB ukwelashwa kwangaphambi kokumisa amabhodi wesifunda aphrintiwe nezakhi ezizwela umswakama ngaphambi kwenhlangano ye-PCB ukuyibhaka ukuze kungabikho umswakama osele ngaphakathi kubo noma ngaphezulu. Ngokubhaka kwe-PCB, inhlangano ye-PCB ikude nezinkinga ze-soldering ezifana ne-IC popcorning. Ungabhaka kanjani ibha ...
Ukuhlaziywa kwesakhiwo sangaphakathi sebhodi le-PCB
Kuyinselelo konjiniyela behadiwe ukuthi baqale bathinte ngama-PCB anezendlalelo eziningi njengezendlalelo eziyisishiyagalombili noma eziyishumi. Namuhla, kunemidwebo yesakhiwo yangaphakathi eminingana yebhodi lesifunda le-Multilayer PCB ukukhombisa ukwakheka kwangaphakathi kwemidwebo ehlukahlukene ye-PCB enemidwebo enezinhlangothi ezintathu. Umnyombo o ...
Ungayenza Kanjani ama-PCB e-Ceramic: Izinqubo Zokukhiqiza ze-Ceramic ze-5 Ceramic
Enziwa kanjani ama-PCB e-ceramic? Njengoba izinto zobumba zazisetshenziswa njengama-substrate e-PCB, izindlela ezimbalwa zasungulwa ukwenza ungqimba wesifunda ku-substrate ye-ceramic. Lezi zindlela yi-HTCC, i-DBC, ifilimu ewugqinsi, i-LTCC, ifilimu elincanyana, ne-DPC. (ngokulandelana kwesikhathi) Chart1 Ceramic PCB HTCC Pros ...
Ungayikhetha kanjani i-LED PCB Base Plate
Iningi lezisekelo ze-PCB ze-LED ziyi-aluminium-substrate, kepha njengoba ukukhanya kwe-LED kudinga ukukhanya okuthe xaxa nokuphila kwishelufu okude, amapuleti esisekelo se-ceramic PCB wokuhlanganiswa kwe-LED. Yikuphi uhlobo LED ipuleti PCB kungcono? Sizokwethula ama-PCB e-LED ahlukahlukene futhi siqhathanise nawo. Izinhlobo LED PCB Base ...
Ukubaluleka kwe-PCBA enkambisweni yokuhlanza
"Ukuhlanza" inqubo edingekayo cishe kuzo zonke izinqubo zamakhemikhali zomkhakha wokukhiqiza we-PCBA. Ukuhlanzwa kwe-PCBA imvamisa kuyinqubo esemqoka ngokulandela inqubo yamakhemikhali, kepha kuvame ukubhekwa njengenqubo edinga ukunakwa okuncane. Kodwa-ke, inkinga ebangelwa ukuhlanzwa okungasebenzi ...
Ubuhle nobubi bezinhlobo ze-PCB Surface Finish
Ukuqedwa kobuso be-PCB kumboza phakathi kwezingxenye nebhodi lesifunda eliphrintiwe elingenalutho. Isetshenziselwa izizathu ezimbili eziyinhloko: ukuthengiswa nokuvikeleka ekudaluleni ukujikeleza kwethusi. Ngoba kunezinhlobo eziningi kakhulu zokuqedwa kwendawo, ukhetha o efanele ...
Ungawathola Kanjani Amabhodi Esifunda Aphrintiwe (1)
Lapho wenza umkhiqizo omusha ofaka uhlobo oluthile lwe-elekthronikhi ebhodini lesifunda eliphrintiwe (i-PCB), ukufaka amabhodi akho ngesandla bese uwafaka ku-hotplate kagesi esebenza kabusha kusebenza kahle. Kodwa-ke, le nqubo yesandla ihamba kancane kakhulu futhi inephutha elikhulu kakhulu ukusetshenziselwa i ...
I-DNP iyithuluzi eliwusizo labaqambi lokunciphisa ubungozi ku-PCBA
Njengoba wazi, ukwehluleka kwe-PCB kungaba nzima ukulungisa. Ngokugwema iphutha elingenakuphikiswa, izinto ze-DNP (okusho ukuthi azigcwali noma azifaki igama elisetshenziswe ekwakhiweni kwebhodi lesifunda ephrintiwe ukukhombisa ukushiywa kwengxenye ethile) kubhekiswa ezintweni ezenzelwe i-circui ...
Yini ukusetshenziswa okujwayelekile emkhakheni wamabhodi wesifunda aphrintiwe?
I-PCB yinto esemqoka yezakhi ze-elekthronikhi. Iningi labantu lizisebenzisa nsuku zonke futhi alizicabangi nakancane ngazo. Zibalulekile kuzo zonke izinhlobo zezimboni. I-PCB inezicelo eziningi, kepha sizokwethula izinhlelo zokusebenza ezivamile ze-PCB. Idivayisi ye-1.Medical Kubuchwepheshe obuthuthukile, kukhona ...